Mmetụta Semalt Na-ekpughe Ọdịiche Dị n'etiti SEO na SMM
Kasị ahịa na-achọ inwe ọganihu n'ịzụ ahịa n'ịntanetị. Otú ọ dị, iji nwee ọganihuntanetị n'ịntanetị, otu chọrọ ụfọdụ usoro oge dịka SEO na SMM. Usoro abụọ ahụ nwere ike ịdọrọ otu onye ahụonye na-adịghị ekwurịta okwu nke azụmahịa dijitalụ. Dị ka ọmụmaatụ, SEO nwere ike ịgụnye ọchụchọ ọchụchọ dịka mgbasa ozi mmadụahia gụnyere mgbasa ozi ịkwụ ụgwọ - bonus gratuit sans depot casino. Usoro abụọ ahụ nwere ike ịba uru n'ọtụtụ ụlọ ahịa ndị dị n'Ịntanet karịsịa ma ọ bụrụ na mmadụ maara ihe dị iche.
Jason Adler, Njikwa Ihe Nlekọta Ahịa nke Ọkachamara Ọrụ Ntanetị, na-enye ụfọdụ isi ihe ndị nwere ike ịiche SEO si SMM:
Nke a bụ ụzọ dị iche iche na ntanetị weebụ nke na-achọ ịbawanye ọhụụ nkeebe nrụọrụ weebụ gị na engines ọchụchọ, karịsịa mgbe otu igodo na nyocha ọchụchọ. SEO na-ejikọta ọtụtụ ihe ndị na-esi na saịtị ma ọ bụ ebe ndị ọzọ ga-enwetaokporo ụzọ site na engines ọchụchọ. Maka dijitalụ marketer. Ihe mgbaru ọsọ nke ọganihu SEO ọ bụla na-aga nke ọma bụ inweta ebe dị mma na ogonke nsonaazụ ọchụchọ maka isiokwu nke enyere. Nke a dị mkpa n'ihi na ị nwere ike imeri gị onye asọmpi, nweta ụzọ ọhụrụ okporo ụzọna nke kachasị mkpa, mee ka mgbanwe ahụ dịkwuo elu. SEO gụnyere iji usoro dịka:
Ngwaọrụ ngwa ngwa
Marketing Engine Engine (SEM) bụ ụzọ dị iche iche maka ịntanetị ahịa.SEM bụ ndepụta nkwado. Ọ gụnyere ịtọ mgbasa ozi ezubere iche na ibe onye na-emepụta ihe ndị na-eme nchọpụta..Usoro gụnyereịchọta. Ụfọdụ ndị na ụfọdụ ndị mmadụ ga-ahụ mgbasa ozi gị maka oge enyere. A na-eji usoro a eme ihe ebe ọ bụ na ọ bụghị yankwụnye ego na-akwụ ụgwọ.
Ọ bụ ezie na SEO na-achịkọta okporo ụzọ site na engines ọchụchọ, SMM bụ dijitalụ ọzọusoro ahịa. SMM ji nlezianya na-eji mgbasa ozi ọha na eze dị ka ụkpụrụ ya maka inweta ndị ahịa n'Ịntanet. Usoro mgbasa ozi na-elekwasị anya na ọha mmadụsaịtị netwọk dị ka Facebook, Twitter, Tumblr, Pinterest na LinkedIn. Ndị na-ere ahịa na mpaghara a na-amụbawanye amara, gbakọtaozi ịntanetị, nweta njikọ ma mee ka akụkụ ego ha bara uru site na iji ụzọ dị iche iche dị na mgbasa ozi mmadụ. Dị ka ọmụmaatụ, Facebook nwere aatụmatụ nke mgbasa ozi akwụ ụgwọ. Mgbasa ozi ndị a ga-elekwasị anya n'otu igwe mmadụ nke i debere n'ụzọ ziri ezi. Ndị ọzọ ahịa n'ịntanetịọwa na mgbasa ozi mgbasa ozi gụnyere:
Videos dịka YouTube ma ọ bụ Vimeo
Ekekọrịta foto dị ka Instagram na Pinterest.
Na omenala, ma SEO na SMM lekwasịrị anya inweta ndị ahịa maka ebe nrụọrụ weebụ. N'agbanyeghịihe dị iche, ha na-eme ka ndị mmadụ mara na ha nwere ikike. N'aka nke ọzọ, ntọghata nke onye ọbịa ga - aonye ahịa anaghị adabere na ha kpamkpam. Ihe ndị ọzọ dị ka ntanetị weebụ wee abanye.
Ụlọ ọrụ na-achọ ka ha nwee ihe ịga nke ọma na-achọ ịntanetị dịka ọnụọgụ abụọ, Otú ọ dị,okwu dị ka Search Engine Optimization (SEO) na Social Media Marketing (SMM) nwere ike ịghọ ihe mgbagwoju anya. Ma SEO na SMM bụ ndị ahịa dijitalụusoro. Ọtụtụ n'ime ha, ha na-eleba anya n'ichepụta visibiliti mara mma na nke kachasị mkpa, inweta ndị ahịa ọhụrụ na ntanetị. Otú ọ dị, ha abụọ bụdị iche n'otú ha si arụ ọrụ. Dịka ọmụmaatụ, SEO gụnyere ịbawanye ọhụụ na nnukwu engines ọchụchọ ma SMM pụtara ịba ụbandi mmadu mara ihe site na iji mgbasa ozi. Site n'ịghọta ọdịiche ha, ma ụzọ dị mkpa ma nwee ike ịba uru dị ogologo ogeịzụ ahịa mgbe arụpụtara ya n'ụzọ ziri ezi.